PMP akwụkwọ ajụjụ gbasara ajụjụ gbasara ajụjụ - ITS Tech School
Ajụjụ nke ajụjụ gbasara ajụjụ gbasara ụlọ akwụkwọ PMP
N'ajụjụ ọnụ a na-enye na mmesi obi ike na nkenke bụ ihe bara uru na ọlaedo. Na agbanyeghi ma ị bụ njirimara ma ọ bụ na ịchọrọ ka ụfọdụ omume merie n'emebi ọrụ gị. Ndị a bụ Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ 14 na azịza maka PMP kwadoro ọkachamara iji merie ule ajụjụ ọnụ na mgbalị mbụ.
Nchịkwa Ụlọ Ọrụ Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ
Ajụjụ Interview PMP na Ntugharị Ha Kasị Mma:
1. Kọọrọ m maka onwe gị.
Malite na njedebe na nkwadebe ọkachamara na-ebute ụzọ n'echiche gị. N'okwu a mgbe onye gbara ajụjụ ọnụ jụrụ ajụjụ a, ha kwesịrị ịghọta ihe mere i ji chee na ị kachasị mma maka ọnọdụ a, nye ha azịza kwesịrị ekwesị. Gbalịa ka ị ghara itinye ndụ gị na azịza a, na-agbakwunye na ọkachamara.
2. Ebee ka ị rụtụrụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya?
Gị gara aga na-arụ ọrụ akụkọ ihe mere eme na PMP nkwenye na-akwadebe. Gwa ezigbo ihe ndị ị rụzuru na ihe ọ bụla. Kwuo otu ụdị nke ga-esi mee ka ọnọdụ a nwee ike ịkwalite n'ihu gị.
3. Ị tinyere aka n'ọrụ a?
Gbalie ike na azịza a. Ajụjụ ndị na-esonụ nwere ike ịbụ banyere mpaghara etiti etiti nke ọrụ ị rụtụrụla na ihe ọbụla nke gosipụtara ihe dị mkpa.
4. Kedu ihe ịma aka ị na-atụ anya iji rụọ ọrụ na ntinye ego a?
N'ihe gbasara mkparịta ụka gị gara aga, azịza gị kwesịrị itinye ihe ngwakọta nke ihe mmụta na ihe ịchọrọ ịchọta ụlọ ọrụ ọhụrụ.
5. Ebee ka ị na-ahụ onwe gị na afọ 5?
N'iburu n'uche nchịkwa gị, ị ga-achọ ka ị rụọ ọrụ na nzukọ ahụ ma mee ka ọ nwee ike ime ihe ọzọ.
6. Gini mere i ji hapụ ọrụ ikpeazụ gi?
Na-achọ ka meghere ọnụ ụzọ ma ọ bụ ohere iji rụọ ọrụ n'ebe ọzọ. Nyochaa otu esi eme ka PMP na-akwadebe mee ka i nwee ike ịrụ ọrụ na nzukọ a ka mma.
7. Kedu ihe ị ga - eme nke ọma?
Na-ekwu banyere ihe ndị ị rụzuru, ọrụ na omenala otu, n'ụzọ zuru ezu na otú o si baara uru na ụlọ ọrụ ahụ niile.
8. Kedu ihe anyị ga-enwe ike ịtụ anya n'aka gị na ụbọchị 90 mbụ?
Debe azịza dị mma ị ga-aza ebe ị nwere ike itinye PMP gị iji kwadebe ihe kacha mma.
9. Kedu ihe bụ ọchịchọ gị?
Kwadoo ngwa ngwa ma nye ha echiche nke maara na ike gị, karịsịa ịchọta nzere nchịkwa azụmahịa.
10. Ọ bụ eziokwu na ị bụ onye na-ekwenye ekwenye?
Ndị na-agba ajụjụ gị kwesịrị ịma ma ị ga-arụ ọrụ na otu ha ruru eru ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dozie ndị ọzọ.
11. Ị meela nkwa ọ bụla na ngalaba nchịkwa azụmahịa?
Ọ bụrụ na ị chebere otu ikpe nke chegharịrị ka ọ bụrụ na ị na-ahụ maka mgbasa ozi na-azụ ahịa, mee ka ị gụchaa ya ma nyefee ka ịjụ ajụjụ.
12. Ntak emi ẹmende nnyịn?
Kwurịta ihe na-adọta n'ime gị na nzukọ a na ihe ị na-eweta na tebụl ha.
13. Kedu ka ị ga - esi merie ihe mgbochi ọkachamara n'ihu?
Nyochaa ihe mgbochi ọ bụla ị rụtụrụla banyere onye ahịa ma ọ bụ otu ị si emeso nsogbu dị egwu na ịmekọrịta.
14. Ị ga-arụ ọrụ dị arọ?
N'elu ohere na nchịkwa nchegbu bụ ihe gị, n'oge ahụ gosipụtara ha otú i si ewe iwe dị elu n'oge ndị a na-amanye mmanye.
Lee kwa:Ebe ọ bụ na ohere ọhụụ na-arụ ọrụ PMP
Ebe ọ bụ na ohere ọhụụ na-arụ ọrụ PMP
MCSA kwadoro ọkachamara - Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ na Azịza